चीन–भारत बढ्दो तनावले नेपालमा के प्रभाव पर्छ ? | रेडियो भरतपुर – Radio Bharatpur
Home समाचार अन्तर्राष्ट्रिय चीन–भारत बढ्दो तनावले नेपालमा के प्रभाव पर्छ ?
on: २०७४ श्रावण ५, बिहीबार १०:०५ In: अन्तर्राष्ट्रिय, आर्थिक, मुख्य समाचार, समाचार
दुई महाशक्ति छिमेकीबीच तनाव बढ्दै जाँदा कूटनीतिक सन्तुलन, आयात–निर्यात र राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपाललाई चुनौती
५ श्रावण २०७४,चीन र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिएको छ भने सैन्य तनाव झन् बढेको छ । विवादित भूमि दोकलामबाट सैनिक तुरुन्त पछि हटाउन भारतलाई चेतावनी दिइरहेको चीनले आफ्नो सैन्य शक्ति सीमाक्षेत्रतर्फ अघि बढाएको छ । चिनियाँ सेनाको एउटा ठूलो समूह दशौँ हजार टन हतियारसहित तिब्बततर्फ अघि बढेको चिनियाँ जनसेनाको मुखपत्र पिएलएले जनाएको छ । एक साताअघि मात्र जनसेनाको एउटा समूहले तिब्बती क्षेत्रमा वर्षको सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास गरेको थियो जसको भिडियो चिनियाँ टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको थियो । चीनले हतियार ओसारेको र युद्ध अभ्यास गरेको क्षेत्र दोकलामबाट नजिकै रहेको हङकङस्थित साउद चाइना मर्निङ पोस्टले जनाएको छ ।
तनाव बढ्दै जाँदा भारतले आफ्नो सेनामा रहेका नेपाली नागरिकलाई लडाइँमा परिचालन गर्न सक्छ । त्यसक्रममा नेपाली नागरिकको भौतिक क्षति हुन सक्ने खतरा छ । यस्तै, नेपाल र छिमेकीबीचको पारस्परिक सहयोगमा समेत गम्भीर समस्या ल्याउन सक्छ । यस्तै, आर्थिक संकटहरू सिर्जना हुन सक्छ । हाम्रो मुलुकको आयात र निर्यातमा समस्या आउन सक्छ ।
सीमाक्षेत्रमा भारत र चीनका सेना आमने–सामने
पछिल्लो अवस्था : दोकलाम क्षेत्रमा चीन र भारत दुवैका सेना तैनाथ छन् । अहिले उनीहरू आमने–सामनेको अवस्थामा छन् । उनीहरूको उपस्थितिले दुई देश युद्धको नजिक रहेको संकेत गर्छ । तर, यी दुई देश साँच्ची युद्धमा गएमा पूरै एसिया मात्र होइन, विश्व नै तानिने लगभग निश्चित छ ।
साँच्चै भिडन्त भए नतिजा कति खतरनाक ?
बिबिसीको समाचार टिप्पणी : चीनसँग युद्ध भए अमेरिका र जापानले भारतलाई कुन हदसम्म सहयोग गर्लान् ? अमेरिकाले भारतलाई साथ दियो भने अहिले आँकलन गरिएकोभन्दा परिणाममा के भिन्नता आउला ? यी प्रश्नमा भारतीयभन्दा चिनियाँ मिडियामा बढी बहस भइरहेको छ ।
यसरी बल्झियो विवाद
भारत र भुटानसँगको सीमाक्षेत्रमा चीनले सडक विस्तार सुरु गरेपछि पछिल्लो विवाद चर्किएको हो । चीन, भारत र भुटानको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा चीनले बनाइरहेको सडकले आफ्नो भूमि मिचिएको भुटानको दाबी छ । यो क्षेत्रमा चीन र भुटानबीच पहिल्यैदेखि सीमाविवाद थियो । चीनले सडक बनाइरहेको भूमि आफ्नो हो भन्ने भुटानको दाबीमा भारतको पनि समर्थन छ । भारत र भुटानबीचको सुरक्षासन्धिअनुसार भुटानको सुरक्षा गर्न भारतीय सेना सो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भारतको दाबी छ । सो सडक निर्माण पूरा भएमा भारतको सुरक्षा जोखिमको २० किलोमिटर क्षेत्र ‘चिकेन नेक’ मा चीनको पहुँच बढ्ने भारतको चिन्ता छ । तर, सो क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै अविलम्ब पछि हट्न चीनले चेतावनी दिएको छ । भुटान र चीनबीचको विवादमा भारतको हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने पनि चीनको भनाइ छ ।
भारतसँगको सैन्य द्वन्द्वबाट जोगिन चीनले प्रयास गर्नेछ, तर सार्वभौमसत्ताको सुरक्षाका लागि युद्धमा होमिन चीन डराउँदैन । भारतीय सेना बन्दोबस्ती सामग्रीसहित परिचालित भएकाले हामी मौन बस्न मिल्दैन । भारतले सेना फिर्ता नगरेमा दुई देशलाई छुट्याउने लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलओएसी)मा ‘अप्रिय’ घटना हुन सक्छ । भारतलाई सन् १९६२ को याद अझै पनि होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
दोकलाम रणनीतिक महत्वको क्षेत्र भएकाले भुटानलाई हेपेर चीनले अतिक्रमण गरेको हो । चीनले सडक बनाउँदा भुटानको भूमि मिचिन्छ र भारतलाई पनि गम्भीर सुरक्षा खतरा निम्तिन्छ । हामी कूटनीतिक पहलद्वारा विवाद अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौँ र प्रयास पनि गर्नेछौँ । तर, सन् १९६२ को युद्धमा भारतले हारेको भनेर सम्झाउने हो भने हामी भन्न चाहन्छौँ– अहिलेको भारत सन् १९६२ को होइन ।
दोकलाम रणनीतिक महत्वको क्षेत्र भएकाले भुटानलाई हेपेर चीनले अतिक्रमण गरेको भारतको तर्क छ । सडक निर्माणले भुटानको भूमि मिचिने र आफूलाई गम्भीर सुरक्षा खतरा निम्त्याउने भारतको चिन्ता छ । भारतका रक्षामन्त्री अरुण जेट्लीले सन् १९६२ र अहिलेको भारत भारतबीच आकाश–जमिनको अन्तर रहेको टिप्पणी गरेका थिए । १९६२ को युद्धमा चीनले भारतलाई हराएको थियो । भारतले दुई देशबीचको समस्या कुटनीतिक ढंगले समाधानले हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । यसअघि पनि सिमा विवाद हुँदा कुटनीतिक तहबाट समाधान गरिएको भन्दै भारतले चीनसँगको वार्तालाई जोड दिएको हो । दोकलाम विवादबारे भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले विपक्षी दलहरूसँग बारम्बार छलफल गरेको छ । बेइजिङसँगको तनाब न्यून गर्न र कूटनीतिक तहबाट समस्या समाधान गर्न विपक्षी दलहरुले सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । तर, चीनले भारतसँग कुनै सम्झौता नगर्ने र ‘बल दिल्लीको कोर्टमा’ रहेको स्पष्ट पारेको छ । सिमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका तनाब अन्त्य गर्न र दुवै देशबीच वार्ता गर्न सन् २०१२ मा संयन्त्र गठन भएको थियो । तर सो संयन्त्रले दोकलामको विवाद समाधानमा कुनै पहल गर्न सकेको छैन ।
सडक निर्माण भइरहेको क्षेत्रमाथि आफ्नो अधिकार रहेको बताउँदै चीनले भुटानी भूभागमा भारतले अनावश्यक हात हालेको आरोप लगाएको छ । चीनले भारतलाई बारम्बार चेतावनी दिदै आएको छ । दुई साताअघि दोकलाममा भारतीय सेना बन्दोबस्ती सामाग्रीसहित परिचालित भएपछि दुई देशलाई छुट्याउने लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलओएसी)मा ‘अप्रिय’ घटना हुनसक्ने चीनले चेतावनी दिएको छ । ‘भारतसँगको सैन्य द्वन्द्वबाट जोगिन चीनले प्रयास गर्नेछ, तर सार्वभौमसत्ताको सुरक्षाका लागि युद्धमा होमिन चीन डराउदैन,’ चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले यसै साता चेतावनीयुक्त भाषामा लेखेको छ । दोकलामबाट भारतीय फौज फिर्ता नभएसम्म दुई देशबीच वार्ता नहुने अर्को सरकारी सञ्चार माध्यम सिन्हवाले चेतावनी दिएको छ । भारत र चीनबीच ३४८८ किलोमिटर लामो सीमा छ । सीमा विवादका कारण दुई देशबीच सन् १९६२ मा युद्धसमेत भएको थियो । सन् १९६२ को युद्ध स्मरण गर्न बेइजिङले दिल्लीलाई चुनौती समेत दिएको छ । अहिलेको चीन त्यतिवेलाको भन्दा कैयाँै गुणा शक्तिशाली भएको बेइजिङको भनाइ छ । सडक परियोजनामा हस्तक्षेप गरेर भारतले भुटानको सार्वभौमसत्तालाई नजरअन्दाज गरेको आरोप चीनको आरोप छ । सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्न भारतीय सेना विनासर्त पछाडि हट्नुपर्ने चीनको माग छ ।
भुटानले पनि सडक निर्माण कार्य तत्काल रोक्न चीनसँग आग्रह गरेको छ । सडक निर्माणले दुई देशबीच विगतमा भएका सम्झौता उल्लंघन गरेको थिम्पुले जनाएको छ । चीनको सडक निर्माण कार्य दुई देशबीचको सम्झौताविपरीत भएको दिल्लीका लागि भुटानका राजदूत भेटसोप नामग्याल बताउछन् । पछिल्लो समयमा बेइजिङले सीमा विवादका विषयमा थिम्पुसँग प्रत्यक्ष रूपमा ‘डिल’ गर्न प्रयासरत छ । भुटानको सार्वभौमसत्ताको विषय उठाएर यतिबेला दुबै देशले थिम्पुलाई आफूतर्फ फर्किन दबाब दिएका छन ।
चीनको ‘सेफ्टी एडभाईजरी’
विवाद बढिरहदा चीनले भारत भ्रमणमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई ‘सेफ्टी एडभाईजरी’ जारी गरेको छ । नयाँ दिल्लीस्थित चिनियाँ दूताबासले आफ्ना नागरिकका लागि एडभाइजरी जारी गरेको हो । भारत भ्रमण गर्ने चिनियाँ नागरिकलाई त्यहाँको सुरक्षा अवस्थाबारे विशेष ध्यान दिन र आवश्यक साबधानी अप्नाउन दूताबासले अनुरोध गरेको छ । दूताबासल जारी गरेको यो सूचना चेतावनी नभएर ‘परमार्श’ मात्र भएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । यसैबीच, चीनको ग्लोबल टाइम्सले भारतमा सञ्चालित चिनियाँ कम्पनीहरुमा चीनविरोधी गतिविधि हुन सक्ने भन्दै सावधान अपनाउन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै चिनियाँ कम्पनीहरुले भारतमा लगानी रोक्नु पर्ने सुझाब सो पत्रिकामा उल्लेख छ ।
भारतीय सेनाको शक्ति
भारतले तीब्र गतिमा आफ्नो सैन्य क्षमता बृद्धि गरिरहेको छ । उत्तरको शक्तिशाली मुलुक चीनबाट हुन सक्ने खतराको मुकाबिला गर्न उनले आणविक क्षमतामा पनि बृद्धि गरेको छ । भारतले पछिल्लो समयमा विकसित गरेको व्यालिष्टिक मिसाईल कार्यक्रम चीनले आँकल गरे जस्तो कम्जोर छैन । भारतको दक्ष हवाई, वायु र जलसेना छ । ग्लोबलफायरका अनुसार भारतको सेना विश्वमै तेस्रो ठूलो शक्तिशाली छ । भारतले पूर्वमा चीन र पश्चिममा पाकिस्तानबाट बारम्बारको खतरा सामना गरेकोले उसले सुरक्षा स्थिति मजबुद बनाएको छ ।
चीन उत्तेजित देखिएको छ, भारतले कूटनीतिक समाधान खोजेको छ
प्रा. लोकराज बराल, भारतका लागि नेपालको पूर्वराजदूत
भारत र भुटानको सम्बन्ध नै विशेष छ । भुटानले आफ्नो सुरक्षा–नीतिमा समेत भारतको भूमिकालाई स्थापित गरेको छ । अहिलेको तनाव भुटान–चीनको सीमा विवादबाट सुरु भएको हो । भुटानको सुरक्षासमेत आफ्नो जिम्मेवारी रहेको भन्दै भारत पुगेपछि यो परिस्थिति बनेको हो ।
चीन र भारतबीच यसअघि पनि यस्ता असमझदारी रहँदै आएका छन् । कतिपय घटनाले खासै चर्चा पनि पाएनन् किनकि त्यस्ता समस्या दुवै देशले कूटनीतिक रूपमा सुल्झाउँदै आएका थिए । अहिले तनाव बढेको छ, तैपनि दुवै देश त्यही दिशातिर जान्छन् भन्ने देखिन्छ । यही घटनाले युद्धको रूप लिइहाल्ने स्थिति देखिँदैन ।
सीमा मामलामा पछिल्लो समय चीन निकै महत्वाकांक्षी देखिएको छ । यता भारतले त्यसलाई आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडेर हेरेको छ । तर, चीन यसपटक बढी उत्तेजित भएर प्रस्तुत भयो । भारतले भने पहिलेजस्तै कूटनीतिक रूपमा समाधान खोज्ने पहल गरिरहेको देखिन्छ ।
यस्तो स्थितिमा नेपालले दुवै देशलाई मिलेर जान अपिल गर्नुपर्छ । तनाव नबढाउन अपिल गर्नुबाहेक नेपालसँग विकल्प छैन । जहाँसम्म भारतीय सेनामा रहेका गोर्खा सैनिक भोलि चीनसँगको लडाइँमा परिचालन गरिए के गर्ने भन्ने चासो छ, यो विषयमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ– उनीहरू भारतीय सैनिक हुन्, त्यहाँ जागिर खान गएका हुन् । भारत सरकारले आफ्नो सेनालाई आफूअनुकूल परिचालन गर्न सक्छ । यसले नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धमा असर गर्दैन ।
चीन र भुटानले वार्ता गरिरहेको वेला भारत अघि सर्दा बिग्रियो
डा. महेश मास्के, चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत
नेपालले यस्तो वेला लिनुपर्ने नीति असंलग्नताको नै हो । हामीले घटनामा भइरहेका यथार्थ अपडेट लिनुपर्छ, तर पक्ष वा विपक्षमा धारणा बनाउन हुँदैन ।
अहिले विवादित भनिएको भूमि चीन र भुटानको आन्तरिक मामला हो । त्यसमा भारत मुछिन पुग्यो । खासमा सीमा विवाद मिलाउन भुटान र चीनबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको थियो । र, विवाद मिल्न लागेको थियो । मिल्नै लागेको वेला यो घटना भएको छ ।
चीनले सडक बनाउँदा विवाद भएको हो भने सुरुमा कूटनीतिक संवादबाट समाधान निकाल्नुपर्ने थियो, तर ठीक उल्टो घटना भएको छ । खासगरी पछिल्लोपटक निर्माण भएको अमेरिका, जापानसहितको गठबन्धनको पक्षमा लागेर यो क्षेत्रको शक्तिराष्ट्र म हो भन्ने देखाउन भारत चाहन्छ । गठबन्धनबाट सुविधा लिने रणनीतिमा भारत देखिन्छ ।
दोकलाम क्षेत्र भारत र चीन दुवैका लागि रणनीतिक महत्वको स्थान हो । तैपनि दुवै मुलुक थप तनाव बढाउने पक्षमा देखिँदैनन् । युद्धमा जाँदा दुवैलाई फाइदा हुनेछैन । त्यस्तो अवस्थामा दुवैले ‘विन–विन’को वातावरण बनाएर कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्छन्, गर्नुपर्छ ।
श्रोतः नयाँ पत्रिका
बुटवल उपमहानगर नगरकार्य पालिकाले पुर्णता पायो ।